Wararka Maanta: Arbaco, Oct 6 , 2021-Guddoomiyaha gobolka Sool "Raafkii maalintii 5aad ayuu socdaa, dadka inta hadhay waxan leeyahay si nabad ku baxa"
Jiidhe ayaa sheegay in masaafuriska gobolka ka socda ay sababtay, dilalka qorshaysan ee mudo sannado ah si isdaba joog ah loola beegsanayay madaxda iyo waxgaradka gobolka.
"2 bisha laga soo bilaabo waxa gobolka Sool iyo degmada Laascaanood ka socotay arrin nabad galyada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood wax badan lagaga qabanayo, 10 kii sano ee u danbeeyay deegaankeena waxa ka dhacayay arrin masiibo qaran ah, oo ah dilal qorshaysan, oo gaar u ah Laascaanood" ayuu yidhi Jiidhe.
Jiidhe ayaa sheegay in go'aanka maasaafurinta dadka aan Somaliland u dhalan ee gobolka ku dhaqan, la gaadhay kadib shirar iyo wada tashi joogto ah oo ay yeesheen dadwaynaha, culimada, waxgaradka iyo maamulka gobolka, isagoo sheegay in uu ahaa go'aan laga fursan waayay si loo sugo amniga gobolka.
"Shacbi waynaha gobolkeena Sool iyo umada Islaan ka ah ba arrintaa aad bay uga dhiidhiyeen, talooyin badan, wax iswaydiin badan iyo shirar badan oo aanu galnay oo aanu iskugu nimid dadwaynaha gobolka Sool, culimada, odayaasha iyo cidwalba oo deegaanka ka tirsan, go'aan wada jir ah oo laga fursan waayay ayaanu qaadnay madaxweynahana waanu la wadaagnay" ayuu yidhi Jiidhe.
Waxa uu Jiidhe intaa ku daray in laysla qaatay in shacbiga gobolka Sool u madax-bannaanaadaan amaan kooda, waxaanu xusay in dadka la saarayo anay ahayn Soomaali kaliya, isagoo ugu baaqay dadka aan Somaliland u dhalan ee wali gobolka kusii hadhsan in ay si nabada ku baxaan.
"Dadka la saaray Soomaali kaliya maaha, cidwalba oo Geeska Afrika ka tirsan way lahaayeen, sida ka timid culimada iyo wax garadka Laascaanood waxa la gartay in aynu u madax-bannaano amaankeena, oo cidkasta oo aan u dhalan Somaliland ay ka baxdo gobolka Sool" ayuu yidhi Jiidhe.
"Shaqadii way socotaa mana dhamaan, maalintii 5aad bay maraysa, waxan usoo jeedinayaa cidkasta oo aan Jamhuuriyada Somaliland u dhalan in ay gobolka ka baxdo, waxa leeyahay intiina hadhay ee dhuun dhuumanaysa, ee meelaha war wareegaysa si nabad ah ku baxa" ayuu hadalkiisa ku daray Jiidhe.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in odayaasha sheegtay in ay yihiin guddida amniga Laascaanood, ay khaldanyihiin isla markaana, xukuumadu amniga ka masuultahay.